किन एक अनुप्रयोग सेवा प्रदायक संग जाने? | Martech Zone
कडा आईटी स्रोतहरू भएको कम्पनीसँग कुरा गर्न र एएसपी मोडेलमा उनीहरूलाई खरीद गर्न चुनौती छ। अधिकांश व्यक्तिहरू विश्वास गर्छन् कि एएसपी र लिगेसी सफ्टवेयर कम्पनी बीचको भिन्नता केवल यो हो कि एकले ग्राहकलाई ह्यान्डल गर्नका लागि सफ्टवेयर र अन्य प्रकाशनलाई अनलाइन जारी गर्दछ जहाँ अनुप्रयोग कायम गर्न सजिलो छ।
उद्योगलाई यस तरीकाले हेर्दै, तिनीहरू दुबै सफ्टवेयर कम्पनीहरू जस्तै देखिन्छन्। त्यो सत्यबाट थप हुन सक्दैन - तर यो अनुभव गर्न गाह्रो छ कि एक अनुभवी आईटी पेशेवरलाई जो कसैलाई नियन्त्रण छोड्न मन पराउँदैन - उनीहरूको दक्षतालाई वास्ता नगरिकन।
ASP के हो?
सफ्टवेयर कम्पनीहरूले सफ्टवेयर समाधानहरू सिर्जना गर्छन्। एप्लिकेसन सेवा प्रदायकहरू व्यावसायिक साझेदार हुन् जसले सफ्टवेयर समाधानहरूको लाभ उठाउँछन्। सफ्टवेयर विक्रेता बग समर्थन र नयाँ सुविधाहरूको लागि लिन सक्छ; जहाँ एक एएसपी को रूप मा उद्योग, यसको प्रवृत्ति, ग्राहकहरु को सफलता र विकास को प्रबंधन गर्न को लागी झुकाव गर्न सकिन्छ र न्यूनतम डाउनटाइम कायम गर्दै रिलीजहरु लाई अगाडि बढाउनुहोस्।
ASP का लागि वेब-आधारित अनुप्रयोग गल्ती नगर्नुहोस्, दुई धेरै फरक छन्। जीमेल वेब आधारित अनुप्रयोग हो। गुगल अफिस वेब आधारित अनुप्रयोग हो। न त ग्राहकलाई सफ्टवेयरको प्रयोग बाहिर कुनै 'सेवा' प्रदान गर्नुहोस्। ASP ले पूर्वाधार, सेवा, सफ्टवेयर र समर्थन प्रदान गर्दछ।
धन्यबाद, कसैलाई ASPs सही नाम दिइएको - अनुप्रयोग सेवा प्रदायक एएसपीहरू प्रत्येक उद्योगको लागि उपयुक्त हुँदैन प्रत्येक सफ्टवेयर समस्याका लागि। त्यहाँ धेरै सफ्टवेयर अनुप्रयोगहरू छन् जुन वेबमा आउटसोर्सिंग भन्दा स्थानीय रूपमा राम्रो काम गर्दछन्। अनुप्रयोगहरू जसलाई क्लाइन्ट र सर्भरको बीचमा डाटाको उच्च खण्डहरू सार्न आवश्यक पर्दछ एक उदाहरण हो - ब्यान्डविथ अवरोध हुन सक्छ।
अनुप्रयोग सेवा प्रदायकहरूले तपाईंलाई आउटसोर्स कर्मीहरू प्रदान गर्छन् जुन उनीहरूको उद्योगमा विशेषज्ञहरू छन्। ASPs ले सफ्टवेयरलाई तपाइँको व्यवसाय वातावरणमा कसरी राम्रोसँग समाहित गर्दछ र सफ्टवेयरको प्रयोग गरी तपाइँको ब्यापार परिणामहरू ड्राइभ गर्न मद्दत गर्दछ।
ASP उदाहरण: ईमेल सेवा प्रदायक
ASP को एक महान उदाहरण एक हो ईमेल सेवा प्रदायक। एक कम्पनी, जस्तै सटीक लक्ष्य, शानदार उद्योग संसाधन छ:
डेलिभरेबिलिटी टीमहरू जुन तपाईंको ईमेललाई स्प्यामको रूपमा गलत पहिचान नगर्न र तपाईंलाई कालोसूचीमा राखी वाइन्ड अप गर्ने सुनिश्चित गर्न ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग काम गर्दछ।
उत्पादन व्यवस्थापन टोलीहरू जसले उद्योग प्रवृत्तिहरूलाई अनुगमन गर्दछ र उनीहरूको सफ्टवेयरले ईमेल सिर्जना गर्दछ कि वस्तुतः सबै ईमेल ग्राहकहरूले देख्न सक्ने छन्।
खाता व्यवस्थापन टोलीहरू जसले तपाईंलाई ईमेल निर्माण, प्रतिलिपि लेखन, र अन्य रणनीतिक सेवाहरू प्रतिक्रियाहरू अधिकतम बनाउन मद्दत गर्न सक्दछन्।
एकीकरण टीमहरू जुन विभिन्न अनुप्रयोग र प्लेटफर्महरूमा विश्वभर कम्पनीहरूसँग काम गर्दछ। तिनीहरूले अनुभव प्रदान गर्छन् जसले गर्दा पहिलो पटक एकीकरण सही रूपमा विकास भयो।
अनुप्रयोग विकास जुन विकासको उच्चतम मापदण्डको समर्थन गर्दछ र धेरैमा टेक्नोलोजी र पूर्वाधारको विकास गर्दछ।
अर्को उदाहरण: अनलाइन अर्डरिंग
रेस्टुरेन्ट उद्योगमा, त्यहाँ अनलाइन अर्डरिंग सफ्टवेयर बेच्ने धेरै मानिसहरू छन्। हामीसँग आईटी मान्छेहरूसँग समान उदासीनता छ कि सामान्य एएसपीहरूसँग ब्रेक गर्नका लागि, सबै कुशल र अनुभवी आईटी टीमहरू जुन विश्वास गर्छन् कि यसले ग्रहमा कुनै पनि सफ्टवेयर लागू गर्न सक्दछ। मलाई उनीहरूमा कुनै श can्का छैन कि तिनीहरूले गर्न सक्दछन् - तर तिनीहरूको विशेषज्ञता सामान्यतया सुरु हुन्छ र सफ्टवेयर सुरु हुने र अन्त्य हुने ठाउँमा रोकिन्छ।
रेस्टुरेन्ट उद्योग अनलाइन अर्डर विक्रेताहरूको समस्या यो हो कि तिनीहरूमध्ये केही उद्योग भन्दा बाहिरका छन् ... तिनीहरूले कसरी बिन्दु A बाट बिन्दु B मा पुग्ने ढोका बन्द गरे र ढोका बन्द गरे। एक अनलाइन बाट एक अर्डर प्राप्त गर्दै POS सजिलो भाग हो। एकचोटि तपाईंले त्यसो गर्न सक्नुभयो, तपाईं 'व्यापारमा' हुनुहुन्छ। कठिन भागहरू, जबकि अनुसरण गर्नुहोस्:
अनुप्रयोग उपयोगिता, अनुकूलता, प्रयोज्य विश्लेषण र प्रयोगकर्ता इन्टरफेस अधिकतम अपसेल्स वृद्धि गर्न र परित्याग दरहरू घटाउन अधिकतम।
अर्डरको लागि एस्केलेसन प्रदान गर्दै जुन आउटसेज, POS मुद्दाहरू, मेनू मुद्दाहरू, कनेक्टिभिटी मुद्दाहरू, भुक्तानी मुद्दाहरू, आदिको कारण त्रुटि। एकल हराएको अर्डर एक आपतकाल हो किनकि तपाईं यसलाई अनलाइन संरक्षकसँग केवल एक मौका मात्र प्राप्त गर्नुहुनेछ यो सहीको लागि।
सही टेक्नोलोजीहरू प्रदान गर्न अनुगमन उद्योगको प्रवृत्ति र नयाँ अपनन र सुरक्षा अनुपालनको लागि उत्तम अभ्यासहरू आवश्यक छ। मोबाइल अर्डरिंग अहिले उद्योगमा ठूलो समाचार हो। तपाइँ कति जनाले SMS द्वारा पिज्जा अर्डर गर्नुभयो? हो, मैले त्यस्तो सोचें।
एकीकरण गर्न विश्लेषण, सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली, प्रति क्लिक भुक्तान विज्ञापन, ईमेल मार्केटिंग र अन्य मार्केटिंग उपकरणहरू कुनै पनि ecommerce प्लेटफर्मको लागि आवश्यक छ। के तपाईंको 'सफ्टवेयर' ले तपाईंको लागि यो गरिरहेको छ? होईन। तर तपाईको एएसपी हुनु पर्छ।
ASPs सुधार र लगानी गर्न आवश्यक छ
एएसपीहरूले आफूलाई बजारमा उत्कृष्ट प्रतिभाको साथ आफैंलाई घेरेका छन, र उनीहरूले अनुप्रयोगहरू निर्माण गरेका छन् जुन राम्रो सम्भावित परिणामहरू प्रदान गर्न दुवै पूर्वाधार र सेवा दुवैको लाभ उठाउँछन्। एएसपी फुर्तिलो छन् र तिनीहरूको सफलता प्रत्यक्ष तपाईंको व्यवसायको सफलता संग जोडिएको छ।
एएसपीहरूलाई अन्तिम लाभ भनेको उनीहरूको सफ्टवेयरको लागि शुल्क लिने तरिका हो। एएसपीले सामान्यतया सदस्यता मोडेल प्रदान गर्दछ जहाँ सफ्टवेयर प्रदायकहरूले लाइसेन्स मोडेल प्रदान गर्छन्। के फरक छ? तपाईं सफ्टवेयर खरीद गर्नुहोस् र यसलाई चलाउनुहोस्। यदि यसले काम गर्दैन भने, यो ठूलो रूपमा तपाईको संगठनमा यसलाई काम गर्न को लागी हो। भाग्यले साथ दिओस्! ASPs को साथ तपाईं सामान्यतया सफ्टवेयर चलाउनुहुन्छ र यसको उपयोगको लागि भुक्तान गर्नुहोस्।
ASPs ग्राहक लिभरेज दिनुहोस्, अनुप्रयोगलाई दिदैन
एक व्यवसाय दृष्टिकोणबाट, यो एक सफ्टवेयर कम्पनी भन्दा अनुप्रयोग सेवा प्रदायक भन्दा धेरै लाभ उठाउन संग एक व्यापार प्रदान गर्दछ। यसले एएसपीलाई दुबै अनुसन्धान र विकास र पूर्ण प्रूफ टेक्नोलोजीहरूमा लगानी गर्न बाध्य गर्दछ। एएसपीहरूको साथ मिथक भनेको यो हो कि उनीहरू अधिक लाभदायक छन्। केहि धेरै ठूला एएसपीहरूसँग काम गरिसकेपछि, म तपाईंलाई आश्वस्त गर्न सक्छु कि लाभ सफ्टवेयर उद्योगको साथ हो।
टैग: चाड परागकणच्याडपोलिटफेसबुक टाइमलाइनgetowebinarइनबाउन्ड मार्केटिंग पुस्तकisaackuno रचनात्मकमोबाइल ईमेल तथ्या .्करेडटाकबिक्री बल